Chaartiiwwan jiruu fi jireenya maatii Chaayinaa agarsiisan shan - BBC News Afaan Oromoo
Erga Pirezidaant Shii aangoo qabatanii waggoota shaniin booda, Chaayinaan qabeenyaafi humna cimaa horachaa jirti. Guddinni kun lammii Chaayinaa tokkoof hiikkaa maalii qaba?
A.L.A bara 2015'tti, mootummaan biyyattii imaammata isaa kan dhala daa'ima-tokko qofa dhabamsiise. Imaammanni kunis lakkoofsa uummataa hir'suu karoora godhatee kan ture yommuu ta'u, lakkoofsi dhiiraafi dubartootaa akka wal hinsimne taasiseera.
Amma carraan daai'mman hedduu horachuun danda'ameera. Hangi gaa'elaa fi gaa'ela diiguun kan biyyoota badhaadhaniin walsimaa jira: innis hangi gaa'elaa yommuu xiqqatu, diiguun ammoo dabalaa deemeera.
Kana irra keessaan yogguu ilaallu, dogoggoruu dandeenya.
''Chaayinaatti yeroo hunda hangi gaa'ela diiguu, Ameerikaafi biyyoota dhiha Awuroppaan ennaa walbira qabamu xiqqaa dha,'' jedhu New York University Shanghai 'tti gargaaraa piroofesaraa kan ta'an Zhuwaan Lii.
Chaayinaan imaammata daa'ima-tokko ALA 2015tti haa hambistu malee, dhiibbaan inni fide baroota dhufanittillee rakkoo ta'uunsaa hinoolu. Dhiirota umriin ganna 30 ol ta'anii hinfuunef jechi Shengnan jedhamu jira. Kunis ''Dhiirota hinfuune, irraa hafan.''
2015tti, daldalaan Chaayinaa umriin isaa 40ta keessatti argamu, dhaabbata namoota walqunnamsiisu Shaangaay keessatti argamu, haadha warraa naaf hinarganne jechuun mana murtiitti himatee ture. Daldalaan kunis Dolaara mil 1 dhaabbata kanaaf kaffaleera jedhameera.
''Imaammanni daa'ima-tokko Chaayinaa, waa hedduu jijjiireera,'' jedhu Luwiis Kuwijis, Oxford Economics irraa. ''Hangi dhalaa hir'achuuniifi lakkoofsi maanguddootaa dabaluun, humna namaa fi guddina diinagdee irratti dhiibbaa uumeera.''
''Imaammanni daa'ima-tokko bara 2016tti haqamee, imaammata daa'imman-lamaatiin bakka haa bu'u malee, hangi dhalaaa dabaluun kan humna namaa hojjatan irratti kan mul'atu, waggoota kurna booda,'' jechuun tilmaamu.
Daataan HSBC irraa argame kan armaan olii kun, naannolee magaalaa Chaayinaa irratti haa xiyyeeffatu malee, waan tokko ibsa: maatiin ilma isaaniitif wanta adda addaa gochuun akka dubartiin gaa'elaaf isa feetu godhu.
''Abbaan warraa meeshaa manaaf ta'u guutuun aadaadha,'' jedhan daarektarri itti-aanaa dhaabbata qorannoo SOAS Chaayinaa argamu Dr. Jieyuu Liwu, yeroo baatii Eebilaa HSBC daataa gad-lakkifame kan dubbatan.
''Dhiirri mana keessa jiraatan yoo qabaachuu baate jaalalleewwan bultii ijaarrachuu hin danda'an.''
Qabxiilee jahan Koriyaa lameen wal madaalchisan
Jireenyi maatii Chaayinaa maal fakkaata?
Galiin giddugaleessaa magaalaa fi baadiyyaa Chaayinaatti guddataa jira. Waggoota kurnan darban gatiin midhaaniif baasan xiqqaataa adeemuus, baasiin fayyaa, uffataafi geejjibaa guddateera.
Baasiin mobaayiliifi omishaalee kominikeeshinii kaaniif baasanis guddateera.
Ismaartifoonii qofaaf miti baasiin bahu - appilikeeshiniin WeChat jedhamu jireenya lammiilee Chaayinaa guyyaa guyyaa keessatti waan fayyaduuf man'ee bilbilaa malee jiraachuun isaan dhiba.
Xiinxalaan teknooloojii Beejing jiraatu, Dunsaan Kilaark, akka jedhutti maamiltoonni ibsaa, gaafa gabaa bahan, taaksii, qarshii daddabarsuu fi wal -qunnamtiif man'ee bilbilaa isaanii fayyadamu.
Namoonni galii guddaa argatan barumsa ijoolleef baasii guddaa baasu. Qorannoo dhiyeenya bahe akka agarsiisutti maatiiwwan Chaayinaa ijoollee isaanii mana barumsaa biyya alaatti ergan baay'ataa jira.
Erga baratanii boodammoo qe'eetti deebi'uun isaanii hin hafu.
''Barattoota alatti ergamanii baratan keessaa hedduun biyya isaaniitti deebi'aa jiru. AL.A bara 2016'tti barattoonni 433,000 ta'an Chaayinaatti deebi'aniiru,'' jedhu ogeessi dinagdee olaanaa APAC Raayiiv Biswaas.
''Barattoonni Chaayinaa hedduu digirii idil-addunyaa argatanii fi biyyoota alaa garaa garaa keessa jiraatan fuuladuratti teessuma dhaabbilee biznasii fi mootummaa ni ta'u.''
Carraan akkanaa ilaachi isaanii akka guddatuufi aadaa biyyoota kaanii akka baran waan taasisuuf, Chaayinaan diinagdee guddicha ijaaraa jirtuuf barbaachisaa dha.
Digiriin yunivarsiitiiwwan Awurooppaa fi Ameerikaa argatan carraa hojii kan bal'isuun alatti dhaabbata gurguddaa keessatti akka hojjettullee carraa si kenna.
Kan gabaase Andiriyaas Ilmar
Giraafiksiin Weslii Istefansan, Maark BIraaysan, akkasumas Sumii Sentinaataan qophaa'e.
Lammileen Masrii Al-Siisii mormuuf hiriira bahan